स्थायी रूपमा अनुहारको कपालबाट कसरी छुटकारा पाउने - कपाल
स्थायी रूपमा अनुहारको कपालबाट कसरी छुटकारा पाउने
१ हर्सुटिज्म भनेको के हो? यस अनुहारको कपालबाट तपाई कसरी छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ?
दुई अत्यधिक अनुहारको कपालको बढ्दो कारण के हो?
3 के एक चिकित्सा अवस्थासँग काम गर्ने हो जसले अत्यधिक कपालको बढ्दो कारण दिन्छ अनुहारको कपाल स्थायी रूपमा छुटकारा पाउनको लागि पहिलो चरण?
चार के DIY घरेलु उपचारहरू अनुहारको कपाललाई सदाको लागि मुक्त गर्न सकिन्छ?
।। के इलेक्ट्रोलिसिसले स्थायी रूपमा अनुहारबाट मुक्त हुन मद्दत गर्न सक्छ?
। के लेजर कपाल हटाउन अनुहारको कपालबाट छुटकारा पाउन मद्दत गर्दछ?
।। के अनुहारको कपाललाई अनुहारको कपालबाट छुटकारा पाउन विकल्प छ?
।। प्रायः सोधिने प्रश्नहरू: स्थायी रूपमा अनुहारको कपालबाट कसरी छुटकारा पाउने
तपाईं एक कडा सौन्दर्य तालिका कायम गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यहाँ एक चीज छ जुन केवल नियन्त्रण गर्न अस्वीकार गर्दछ। हामी अनुहारको अनावश्यक कपालको बारेमा कुरा गर्दैछौं। कहिलेकाँही हामी अत्यधिक बृद्धिबाट ग्रस्त हुन्छौं र हामी आफैंलाई घाँटीमा फेला पार्दछौं कि कसरी (सामान्यत: मोटा र गाढा) अनुहारको कपाललाई स्थायी रूपमा छुटकारा पाउन सक्छौं। भन्नु पर्दैन, अनुहारको कपालले भावनात्मक टोल अध्ययन लिन सक्छ कि अनुहारको कपालबाट पीडित महिलाहरूले चिन्ताको चिन्ताको स्तरमा रिपोर्ट गर्छन्। बेलायतमा गरिएको २०० 2006 को एक अध्ययनले देखाउँदछ कि अनुहारको कपाल भएको महिलाले हप्तामा डेढ घण्टा भन्दा बढी समस्या व्यवस्थापन गर्न को लागी खर्च गर्दछन्। त्यसो भए, को सरल र प्रभावकारी तरिकाहरू के हुन् कसरी स्थायी रूपमा अनुहारको कपालबाट छुटकारा पाउने ? यहाँ एक डाउनडाउन छ।
१. हर्सुटिज्म भनेको के हो? यस अनुहारको कपालबाट तपाई कसरी छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ?
सब भन्दा पहिले चीजहरू तपाईलाई थाहा पाउनु पर्छ hirsutism के लाग्छ। Hersutism तपाईंको अनुहार वा तपाईंको शरीरको अन्य भागहरुमा अत्यधिक कपाल बृद्धि बाहेक केहि छैन। सामान्यतया, यसले महिलालाई प्रभाव पार्छ अध्ययनले देखाउँदछ कि १ in मा एक महिलामा hersutism छ। यदि तपाईको कपालको बाक्लो गाढा र कालो छ, र राम्रो र पातलो छैन भने तपाईसँग अत्यधिक हिर्सुटिज्म हुन सक्छ। कहिलेकाँही, हिर्सुटिज्मको एकैसाथ लक्षणहरूमा अनियमित मासिक धर्म, तेल छाला र मुरुमाहरू समावेश हुन सक्छ। हिरसुटिज्मको साथ व्यवहार गर्ने पहिलो चरण भनेको एक डाक्टरसँग परामर्श लिनु हो जसले तपाईलाई धेरै जसो मेडिकल टेस्ट लिनको लागि सोध्न सक्दछ कि पहिलो स्थानमा हेर्सुटिज्म के हुन्छ भनेर जाँच्न। Hersutism को डिग्री थाहा छ तपाईं कसरी अनुहारको कपाल स्थायी रूपमा छुटकारा पाउन योजना गर्न मद्दत गर्दछ।
सुझाव: तपाईले पीडित हुनुभएको hirsutism को डिग्री थाहा पाउन डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस्।
२. अनुहारको कपाल बढ्ने कारणहरू के के हुन्?
सामान्यतया भन्नुपर्दा, hersutism androgens भनिने पुरुष हार्मोनको अतिरिक्तमा श्रेय दिइन्छ। हर्मोनल असंतुलन प्राय: यस प्रकारको कपालको विकासको लागि जिम्मेवार छ। अन्य कारणहरूमा जन्मजात एड्रेनल हाइपरप्लासिया (एक वंशानुगत चिकित्सा अवस्था जसले एड्रेनल ग्रंथिहरूलाई असर गर्दछ), मोटापा वा एक तीव्र वजन र एनाबोलिक स्टेरॉइड्सको सेवन समावेश गर्दछ जुन सामान्यतया मांसपेशिहरू निर्माण गर्न चाहने व्यक्तिहरू द्वारा खपत गरिन्छ। तर पीसीओएस (पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिन्ड्रोम) तपाईंको अनुहार वा तपाईंको शरीरको अन्य भागहरूमा अत्यधिक कपाल बढ्ने सबैभन्दा सामान्य कारण हो भनिन्छ।
सुझाव: तपाइँ कुनै विस्तारित को लागी अप्ट गर्नु भन्दा पहिले अनुहारको कपाल विरुद्धको उपचार , के कारण तपाइँ समस्या पैदा गर्दै छ जान्नुहोस्। यसले तपाईंलाई रणनीति बनाउनको लागि मद्दत गर्दछ स्थायी रूपमा अनुहारको कपालबाट छुटकारा पाउने ।
कसरी हेयरफॉल र डन्ड्रफबाट छुटकारा पाउने
A. के अत्यधिक कपालको बृद्धि हुने एक चिकित्सा अवस्थाको साथ व्यवहार गर्ने अनुहारको कपाल स्थायी रूपमा छुटकारा पाउनको लागि पहिलो चरण हो?
यदि तपाइँसँग एक चिकित्सा अवस्था छ कि अत्यधिक कपालको बृद्धि गर्न अग्रसर गर्दैछ भने, तपाइँले सर्वप्रथम यस रोगलाई समेट्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। अध्ययनले देखायो कि पीसीओएसले अत्यधिक कपालको वृद्धिका बारेमा 72२ देखि 82२ प्रतिशत देखाउँदछ। त्यसोभए, यदि तपाईंलाई पीसीओएसको साथ पत्ता लागेको छ भने तपाईंले युद्धको आधारमा समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ। चिकित्सा अवस्था सम्बोधन गर्न धेरै तरिकाहरू छन्। यदि तपाइँ अधिक वजनको हुनुहुन्छ र पीसीओएसको साथ पत्ता लगाउनु भएको छ भने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाएर वजन घटाउनु तपाईको मासिक धर्म चक्र नियमित गर्न मद्दत गर्दछ। विज्ञहरू भन्छन् कि तौल घटाउँदा तपाईको इन्सुलिनको स्तर कम हुन्छ, परिणामस्वरूप कम टेस्टोस्टेरोनको स्तर हुन्छ जसले फलस्वरूप प्रजनन क्षमतामा सुधार ल्याउँदछ तर देखिने लक्षणहरू पनि कम गर्दछ जस्तै अत्यधिक कपालको बृद्धि र एक्ने।
मौखिक गर्भनिरोधक गोलीहरू पीसीओएसका लागि व्यापक रूपमा निर्धारित छन्। यस बाहेक, टेस्टोस्टेरोन घटाउन र ओभुलेशन उत्तेजित गर्न हर्मोन औषधिहरू र मधुमेह उपचारको लागि मेटफर्मिन जस्ता औषधिहरू पनि निर्धारित गरिन्छ। ठूला सिसुटरहरू हटाउन र टिशूहरू नष्ट गर्न सर्जरी जुन एन्ड्रोजेनहरू उत्पादन गर्दछ सामान्यतया अन्तिम विकल्प मानिन्छ।
सुझाव: व्यायाम गर्नुहोस्, स्वस्थ खानुहोस् र PCOS समस्याहरू नियन्त्रण गर्न मोटोपनासँग लड्नुहोस्।
DI. के DIY घरेलु उपचारहरू अनुहारको कपाललाई सदाको लागि मुक्त गर्न सकिन्छ?
यो गर्न सक्दछ जब सम्म तपाईं अत्यधिक hirsutism छ। अनुहारको कपाल विरुद्ध कडा रासायनिक उपायहरूको सट्टा, यी सरल तर प्रभावशाली घरेलु उपचारहरूले तपाईंलाई निश्चित रूपमा सहयोग गर्न सक्दछ स्थायी रूपमा अनुहारको कपालबाट छुटकारा पाउनुहोस् :
चर्चीको पीठो मास्क
एक कचौरामा, आधा कप चनाको पिठो, २ चम्चा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ताजा क्रीम र आधा कप दूध मिसाएर पेस्ट बनाउँनुहोस्। त्यस क्षेत्रमा लागू गर्नुहोस् जहाँ कपालको वृद्धि एकदम देखिन्छ र २०--30० मिनेट कुर्नुहोस्। कपालको विकासको विपरित दिशामा बिस्तारै रगनुहोस् र नुनको पानीले कुल्ला। उत्तम परिणामहरूका लागि हप्तामा कम्तिमा दुई पटक यो प्याक प्रयोग गर्नुहोस्।
रूसी र सुख्खा कपालको लागि घरेलु उपचार
पपीता र हल्दी मास्क
कटोरामा २ चम्चा पपीता पेस्ट, ½ चम्मच हल्दी पाउडर र t चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएर एउटा टाँस्नुहोस्। अनावश्यक कपालको वृद्धि देखाउँदै क्षेत्रमा पेस्ट लागू गर्नुहोस्। सुक्खा नभएसम्म यसलाई २० मिनेटसम्म छोड्नुहोस्। यसलाई कपालको विकासको विपरित दिशामा रबिंगबाट हटाउनुहोस्।
चनेको पीठो र गुलाब पानी
T चम्चा हरियो चनेको पीठो, एक चम्चा गुलाब पानी र एक चम्चा नीबूको रस र यसलाई कचौरामा राम्रोसँग मिलाउनुहोस्। ती क्षेत्रहरूमा लागू गर्नुहोस् जहाँ कपालको वृद्धि सबैभन्दा देखिन्छ। Minutes० मिनेट वा त्यसमाथि वा यो पूर्ण रूपमा सुक्ने समय सम्म प्रतीक्षा गर्नुहोस्। गोलाकार गतिमा मास्क बन्द गर्नुहोस्।
हनी निम्बू मास्क
पूरै कागतीको रस आधा चम्चा महमा मिसाउनुहोस् र चिल्लो पेस्ट बनाउनुहोस्। मिश्रणलाई प्रभावित क्षेत्रमा लागू गर्नुहोस् र यसलाई २०-२5 मिनेटको लागि छोड्नुहोस्। यसले अनावश्यक कपाललाई हल्का गर्न मद्दत गर्दछ किनकि निम्बूको ब्लीचिंग गुण हुन्छ।
केरा र दलिया स्क्रब
एक भाँडोमा तीन चम्मच ओटमीलको साथ एक म्यासिएको केलो मिक्स गर्नुहोस्। गोलाकार गतिमा यसलाई १ face-२० मिनेट तपाईंको अनुहारमा मालिश गर्नुहोस् र पानीले धोई दिनुहोस्। उत्तम परिणामहरूको लागि, हप्तामा दुई पटक मास्क प्रयोग गर्नुहोस्।
कपालको विकासको छिटो घरेलु उपचार
चामलको पीठो, हल्दी र दूध
T चम्मच चामलको पिठो, एक चम्चा हल्दी पाउडर र २ चम्चा दूध। सबै सामग्री एकसाथ मिक्स गर्नुहोस्। पानी थप्नुहोस्, यदि आवश्यक छ भने। प्रभावित क्षेत्रहरूमा यो मास्क लागू गर्नुहोस् र minutes० मिनेट कुर्नुहोस्। एकपटक यो पूरै सुख्खा भएपछि नुनको पानीले धुनुहोस्।
गुलाब पानी, जैतूनको तेल र फिटकरी
अलमको अलिकति लिनुहोस्, एक चम्चा गुलाब पानी र एक चम्चा जैतून तेल। सबै मिश्रण - निश्चित गर्नुहोस् कि फिटकरी (यसलाई पाउडरमा बदल्नुहोस्) गुलाबको पानीमा घुलन गर्दछ। कपासको बलले प्रभावित क्षेत्रहरूमा लागू गर्नुहोस्। यो पूर्ण रूपमा सुक्खा सम्म प्रतीक्षा गर्नुहोस्। अर्को लेयर लागू गर्नुहोस् र सुख्खा नभएसम्म कुर्नुहोस्। यसलाई times पटक दोहोर्याउनुहोस्। धुनुहोस् र एक छाला एक छाला संग जैतून तेल को केही छाला को साथ छाला हाइड्रेट।
अण्डा र मकैको पीठो मास्क
२ चम्मच चिनी एक चम्मच कर्नफ्लोर र एक अण्डेको साथ मिक्स गर्नुहोस् बाक्लो पेस्ट बनाउनुहोस्। यसलाई अनुहारमा लगाउनुहोस् र १ 15-२० मिनेटसम्म सुकाइदिनुहोस्। यसलाई सुकाइएपछि यसलाई हल्का हान्नुहोस्, अधिकतम परिणामहरूको लागि हप्तामा तीन पटक दोहोर्याउनुहोस्।
जौ र दुध स्क्रब
२ चम्चा जौ पाउडर एक चम्चा दूध र चूना को रस संग मिक्स प्रत्येक एक पेस्ट बनाउन को लागी। तपाइँको अनुहारमा लागु गर्नुहोस्, र यसलाई २० मिनेटसम्म प्राकृतिक रूपमा सुक्नुहोस्। गुनगुनाएको पानीले धुनुहोस्।
जिलेटिन र दूध
२ चम्चा अनफ्लाभरेटेड जिलेटिन पाउडर, t चम्मच दूध र केही बूँदें निम्बूको रस। सबै मिक्स गर्नुहोस् र 30० सेकेन्डको लागि मिश्रण तताउनुहोस्। मिश्रण चिसो हुन दिनुहोस् र अनुहारमा लागू गर्नुहोस्। १० मिनेट कुर्नुहोस् र यसलाई छुटाउनुहोस्। यो मास्क प्रयोग नगर्नुहोस् यदि तपाईंसँग संवेदनशील छाला छ।
कम्मर घटाउन को लागी सबै भन्दा राम्रो व्यायाम
लैभेंडर तेल र चिया रूखको तेल
यो विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, आवश्यक तेलहरूको मिश्रणले एन्टि-फेशियल हेयर मास्कको रूपमा काम गर्न सक्दछ। २ चम्चा लभेंडर तेल र drops ड्रप चिया-रूखको तेल लिनुहोस् र एउटा सानो कचौरामा राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्। एक कटन बल संग दिनमा दुई पटक लागू गर्नुहोस्। यी आवश्यक तेलहरूले एन्ड्रोजेनको बिरूद्ध कार्य गर्दछ र कपालको बृद्धिलाई रोक्न सक्छ।
मसूर, आलु र मह
तपाईंलाई आधा कप पहेलो दाल, आलु, केही बूँदें निम्बूको रस र एक चम्चा मह चाहिन्छ। दाललाई रातभरि भिजाउनुहोस् र बिहान बाक्लो पेस्टमा बदल्नुहोस्। आलुको बोक्रा तानेपछि यसलाई जुस निकाल्न प्रोसेसर प्रयोग गर्नुहोस्। मसूरको पेस्ट र आलुको रस मिक्स गर्नुहोस्। कागतीको रस र मह जोड्नुहोस्। प्रभावित क्षेत्रहरूमा लागू गर्नुहोस् र करीव आधा घण्टा कुर्नुहोस्। एक पटक मास्क पूर्ण रूपमा सूख्नुभयो भने, यसलाई तपाइँको औंलाहरूले बन्द गर्नुहोस्।
सुझाव: कम्तिमा हप्तामा एक पटक अनुहारको कपाल हटाउनका लागि यी कुनै मास्कहरू प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
Elect. इलेक्ट्रोलाइसिसले स्थायी रूपमा अनुहारबाट मुक्त हुन मद्दत गर्न सक्छ?
इलेक्ट्रोलाइसिस स्थायी रूपमा अनुहारको कपालबाट छुटकारा पाउनको लागि एक लोकप्रिय तरीका हो। मूलतः, इलेक्ट्रोलाइसिसको बेला, एपिलेटर उपकरण छालामा घुसाइन्छ र सर्टवेभ रेडियो फ्रिक्वेन्सीहरू कपालका फोलिकल्सहरूलाई क्षति पुर्‍याउन र नयाँ कपालहरू बढ्नबाट रोक्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। तपाईले लामो समयसम्म कपाल हटाउने लाभ इलेक्ट्रोलाइसिसबाट मात्र पाउन सक्नुहुन्न तपाईलाई अनुहारको कपाल स्थायी रूपमा छुटकारा पाउन धेरै फलो-अपहरू आवश्यक पर्दछ। तर यदि तपाईंसँग धैर्यता छ, र बुट गर्न पैसा छ भने, इलेक्ट्रोलिसिसले तपाईंलाई अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ, विज्ञहरूको अनुसार। अझ बढी, यो एक कम मर्मत प्रक्रिया हो।
अघि र पछि कपालको लागि बदामको तेल
तर उचित विज्ञलाई परामर्श नगरी इलेक्ट्रोलीजमा जानु हुँदैन। यस प्रक्रियाको लागि तपाईंलाई प्रमाणित त्वचा विशेषज्ञ आवश्यक छ। यदि अनस्टिलिस्ड सुई प्रयोग गरियो भने, यो प्रक्रियाले गम्भीर संक्रमण निम्त्याउन सक्छ।
सुझाव: इलेक्ट्रोलिसिसको लागि एक प्रमाणित त्वचा विशेषज्ञ आवश्यक छ।
La. के लेजर कपाल हटाउन अनुहारको कपालबाट छुटकारा पाउन मद्दत गर्दछ?
अनुहारको कपाल स्थायी रूपमा छुटकारा पाउन लेजर कपाल हटाउने अर्को लोकप्रिय विधि हो। जे होस्, लेजर कपाल हटाउने पूर्ण अप्लिकेशनको लागि यो छनौट गर्नु अघि यो बुझ्न आवश्यक छ। सामान्यतया, लेजर कपाल हटाउन उच्च गर्मी लेजरको सहयोगमा हल्का विकिरणको तैनाती समावेश गर्दछ। आधारभूत सिद्धान्त यो हो, कपालको फोलिकल्सलाई बिग्रिनु पर्दछ स्थायी रूपमा कपालको वृद्धि रोक्नको लागि। फेरि, यो लामो अवधि को लाभ प्राप्त गर्न को लागी एक फलो-अप को आवश्यक छ। साथै, यो एक महँगो प्रक्रिया हुन सक्छ। तेस्रो, तपाईलाई राम्ररी देखभाल कार्यविधि चाहिन्छ। उदाहरण को लागी, त्यहाँ कुनै जिम, मेकअप, स्पा वा saunas लेजर उपचार पछि हुन सक्छ। तपाईंले आफ्नो छाला विशेषज्ञले सिफारिस गरेका विशेष उत्पादनहरू पनि प्रयोग गर्नुपर्नेछ तपाईंले स्क्रब, ग्लाइकोलिक एसिड र रेटिनल क्रीमबाट बच्न आवश्यक छ। सावधानीको अर्को नोट: लेजर स्थायी १०० प्रतिशत होइन, केश केही समय पछि देखा पर्न सक्छ।
Fac. अनुहारको कपाललाई अनुहारको कपालबाट छुटकारा पाउन विकल्प छ?
तपाईंलाई अनुहारको वेक्सिing्ग पनि विचार गर्न आग्रह गर्न सकिन्छ किनकि पछिल्लोले यसको जराबाट कपाल उखेल्न सक्छ। यदि तपाईं निपुण हुनुहुन्छ भने, तपाईं यो घरमै गर्न सक्नुहुनेछ, तर यो प्राय जसो सलुन प्रक्रियाको रूपमा गरिन्छ। स्थायी कपाल हटाउने तरिकाहरूको विपरीत यो सस्तो पनि छ, र सजीलो छ किनकि कपालको समूह एकैचोटि हटाइन्छ। साथै, समयको अवधिमा, वेक्सिंगले स्थायी कपाल हटाउन प्राप्त गर्दछ यदि फोलिकल पर्याप्त कमजोर भयो भने। नरम मोम (कस्मेटिक प्रयोगको लागि अनुमोदित) एक स्प्याटुला वा बटर चाकू जस्ता वस्तुको साथ इच्छित क्षेत्रमा लागू गरिन्छ। यसमा कपडा वा कागज स्ट्रिपहरू लागू हुन्छन्, र छालामा दृढ रूपमा थिचिन्छन्। त्यसपछि पट्टी चाँडै फ्याँकिन्छ कपालको बृद्धिको दिशा विरूद्ध। आजका दिनहरूमा कडा मोम पनि उपलब्ध छ, जहाँ मैनलाई कपडाको प्रयोग बिना नै काट्न सकिन्छ। त्यहाँ केहि डाउनसाइडहरू हुन सक्छ। सुरुमा, वेक्सिंगले अक्सर छालामा रगत खेर जान सक्छ। त्यहाँ छालाको जलन, मलिनकिरण र अन्य एलर्जी प्रतिक्रिया पनि हुन सक्छ। किनकि तपाईले प्रक्रिया दोहोर्याउनु पर्दछ, दुखाई स्थायी सुविधा हुन सक्छ।
सुझाव: कडाईको अनुहारको वेक्सिंगबाट बच्नुहोस्, यदि तपाईंसँग संवेदनशील छाला छ।
प्रायः सोधिने प्रश्नहरू: स्थायी रूपमा अनुहारको कपालबाट कसरी छुटकारा पाउने
Q: एक Ferriman-Gallwey सूचकांक के हो? यो अनुहारको कपालबाट छुटकारा पाउन कसरी सम्बन्धित छ?
प्रापक: सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, यो सूचकांक जसमा hersutism वा पुरुष बान्की शरीर कपाल विकास को डिग्री महिलाको लागि गणना गरिन्छ। १ 61 .१ मा बनाइएको, मूल सूचकांकले महिलामा ११ वटा शरीर क्षेत्रहरू हेरे, कपाललाई शून्य (कपाल नभएको) बाट चार (विस्तृत कपाल) मा रेटिंग गरे। यो मापन पछि सरलीकृत गरियो। सामान्यतया, सूचकांकमा अब अनुहार, छाती, पेट, हतियार र खुट्टा जस्ता क्षेत्रहरूमा कपाल वितरणको छविहरू सम्मिलित छन्। आठ देखि १ of को अ्कले सामान्य हल्का hirsutism लाई संकेत गर्दछ जबकि १ beyond भन्दा माथि स्कोर ले अत्यधिक कपालको बृद्धिलाई संकेत गर्दछ।
प्रश्न: क्या हर्सुटिज्म वा अनुहारको अनुहारको कपालको वृद्धि PCOS स indicate्केत गर्न सक्छ?
प्रापक: Hirsutism जस्तो एक दृश्य लक्षण वास्तवमा यसलाई PCOS निदान गर्न धेरै सजिलो बनाउँदछ। यदि तपाइँ वेक्सिंग, थ्रेडि and र प्लकिंगमा धेरै समय खर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने, र यदि तपाइँको छालामा छालाले सबै चोटपटक दुख्ने महसुस गर्दछ भने, सम्भाव्यता यो छ कि तपाइँ पीसीओएसको मूल मुद्दालाई बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ। PCOS को साथ लेजर उपचारको साथ उपचारले कपालको बृद्धिलाई एकदम घटाउन सक्छ। यो संयुक्त प्रयासले तपाईंलाई स्थायी रूपमा अनुहारको कपालबाट छुटकारा पाउन मद्दत गर्दछ।
हामी कसरी प्राकृतिक रूपमा कपाल झर्ने रोक्न सक्छौं?
कपालको वृद्धि समीक्षाको लागि बदामको तेल
पेट बोसो को लागी घर व्यायाम
चम्किला छालाका लागि प्राकृतिक सुझावहरू
डबल चिन कसरी नियन्त्रण गर्ने